ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုနားလည်ခြင်း - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2014-03 > နိုငျငံတျောကိုနားလညျ
သခင်ယေရှုသည် သူ၏နိုင်ငံတော် ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ဆုတောင်းရန် တပည့်တော်များအား မိန့်ကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ဤနိုင်ငံတော်သည် အတိအကျဖြစ်ပြီး မည်သို့မည်ပုံ အတိအကျဖြစ်လာမည်နည်း။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို သိခြင်း (မဿဲ ၁3,11) ယေရှုသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို တပည့်တော်တို့အား သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြင့် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ “ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် တူ၏…” ဟုဆိုကာ မုန်ညင်းစေ့ငယ်၊ လယ်၌ ဘဏ္ဍာရှာသောသူ၊ မျိုးစေ့ကြဲသော လယ်သမား၊ သို့မဟုတ်၊ အလွန်ထူးခြားသောပုလဲတစ်လုံးကိုရရှိရန် သူ၏ဟဗက္ကုတ်နှင့် ပစ္စည်းအားလုံးကို ရောင်းချသော မှူးမတ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဤနှိုင်းယှဥ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် “ဤလောကမှထွက်ပြီ” ဟု တပည့်တော်များအား သွန်သင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည် (ယောဟန် ၁၈း၃၆)။ သို့တိုင် တပည့်များသည် သူ၏ရှင်းလင်းချက်ကို ဆက်လက်နားလည်မှုလွဲခဲ့ကြပြီး ယေရှုသည် ၎င်းတို့၏ဖိနှိပ်ခံလူများကို နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်မှု၊ တန်ခိုးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတစ်ခုသို့ ပို့ဆောင်မည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် အနာဂတ်နှင့် ပိုသက်ဆိုင်ပြီး ပစ္စုပ္ပန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် သက်ရောက်မှုနည်းပါးကြောင်း ယနေ့ခရစ်ယာန်များစွာ နားလည်ကြသည်။
မည်သည့်ပုံဥပမာမျှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏အပြည့်အ ၀ အတိုင်းအတာကိုမဖော်ပြနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေတွင်အောက်ပါတို့သည်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည် - ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်အဆင့်သုံးဒုံးပျံနှင့်တူသည်။ ပထမအဆင့်နှစ်ခုသည်လက်ရှိကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏အမှန်တကယ်နှင့်သက်ဆိုင်ပြီးတတိယသည်အနာဂတ်၌တည်ရှိသောပြီးပြည့်စုံသောကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အဆင့် ၁: အစ
ပထမအဆင့်အရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာတွင်စတင်သည်။ ၎င်းသည်ယေရှုခရစ်၏လူ့ဇာတိခံယူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်လူခပ်သိမ်းတို့အနေဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်များအနေနှင့်သခင်ယေရှုမည်သည့်နေရာ၌မဆိုဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လည်းတည်ရှိသည်။
အဆင့် ၂: လက်ရှိအဖြစ်မှန်
ဒုတိယအဆင့်သည်သခင်ယေရှုသည်သူသေခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ တက်ကြွခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကိုပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ရာများနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ သူသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စုပ္ပန်မရှိတော့သော်လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်နေထိုင်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ယခုတည်ပါ၏။ ဒါဟာဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံး၌ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေသည်မည်သည့်နိုင်ငံပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိပြီးဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင်နေထိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြပြီးဖြစ်သည်။
ယေရှုနောက်လိုက်သူများသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာကြသည်။ ယေရှုသည် တပည့်တော်များအား ဆုတောင်းရန် သွန်သင်သောအခါ “ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံတော် လာပြီ။ အလိုတော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိသကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်မှာ ပြည့်စုံပါစေသော။” (မဿဲ၊ 6,10ပစ္စုပ္ပန်ရော အနာဂတ်ရော ပစ္စုပ္ပန်အတွက်ပါ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ သူ့ကို ရင်းနှီးစေတယ်။ သခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်များအနေနှင့် ဤနေရာတွင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည့် ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံတော်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအကြောင်း သက်သေခံရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ထားသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် အနာဂတ်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေမည့် အရာတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ မတွေးသင့်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားများအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူသားချင်းများကိုလည်း ဤနိုင်ငံတော်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာစေရန် ဖိတ်ကြားရန် ဖိတ်ခေါ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ဆင်းရဲငတ်မွတ်သောသူများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ဖန်ဆင်းခြင်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုလည်း ဆိုလိုသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏လူချင်းအားဖြင့် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် အသိအမှတ်ပြုနိုင်သောကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်၏သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေပါသည်။
အဆင့် ၃: အနာဂတ်ကြွယ်ဝမှု
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တတိယအဆင့်မှာအနာဂတ်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သခင်ယေရှုပြန် လာ၍ မြေကြီးသစ်နှင့်ကောင်းကင်သစ်ကိုအသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏ကြီးမြတ်မှုအပြည့်အ ၀ ရရှိလိမ့်မည်။
ထိုအချိန်တွင် လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်ကို သိကြပြီး၊ သူသည် အမှန်တကယ် မည်သူဖြစ်သည်ကို သိကြလိမ့်မည်—“အလုံးစုံ”1. ကောရိန္သု ၁5,28) ယခုအချိန်တွင် အရာအားလုံး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့တွင် နက်ရှိုင်းသော မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်။ ပေါလု၏စကားများကို ကျွန်ုပ်တို့ လုံးလုံးနားမလည်နိုင် သေးသည့်တိုင် အမှတ်ရနေစေကာမူ ဤအခြေအနေများကို စိတ်ကူးပုံဖော်ကာ မည်သို့မည်ပုံဖြစ်မည်ကို စဉ်းစားရန် အားပေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။1. ကောရိန္သု 2,9) သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ တတိယအဆင့်ကို အိပ်မက်မက်နေချိန်တွင်၊ ပထမအဆင့်နှစ်ခုကို မမေ့သင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်သည် အနာဂတ်တွင်ရှိသော်လည်း၊ နိုင်ငံတော်သည် ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အား လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်ရန်နှင့် ယေရှုခရစ်၏သတင်းကောင်းကို ဖြန့်ဝေရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် (ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ်) တွင်ပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခံရပါသည်။